सार्वजनिक स्थानमा फोहोर फाल्ने गर्नुहुन्छ ? साबधान अब कार्बाहिमा पर्नुहोला – Businesssansar
विभागका प्रमुख हरिबहादुर कुँवरले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई फोहोर फाल्नेलाई कानुनबमोजिम कारवाही गर्न सहयोगका लागि आग्रह गरेको बताए ।‘सिडओ साहब हाम्रो प्रस्तावमा सहमत हुनुभएको छ । अब ड्युटीमा रहेका प्रहरीले पनि हामीलाई फोहोरमैला नियन्त्रणमा सहयोग गर्नुहुनेछ,’ कुँवरले भने ।
‘प्रहरी २४ घण्टा नै सार्वजनिक स्थानमा खटिएको हुन्छ । हामीले मात्रै नियनत्रण्का लागि गरेको प्रयास सफल भएन,’ कुँवरले भने,’अब प्रहरीको सहयोग लिएर जथाभावी फोहोर फाल्नेलाई हामी कारवाही गर्छौं ।
Previous Post: पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा ‘तीन’ प्रमुख फेरियो, पुनर्निर्माण १०प्रतिशत मात्रै किन ?
Next Post: हेटौडाको शिवम् सिमेन्टले गर्‍यो डिलरहरुलाई सम्मान